राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने, कसले के भने ?
काठमाडौं । उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई आपत्तिजनक भनेका छन् । उनले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आक्रमण समेत भनेका छन् ।
यसैबिच राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधिसमाथिको महाअभियोगबारे....
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिए राजीनामा
काठमाडौं । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजिनामा दिएको कारणबारे भने खुलेको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको बताइएपनि निधिले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षकलाई जेल सजाय
काठमाडौं । सुडानको डार्फरमा पठाइएका प्रहरीलाई चाहिने एपिसी लगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ ।
सामान खरिदमा घोटाला गर्नेहरुमा ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ्ग र रमेशचन्द ठकुरी रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की र न्यायाधीश....
सरकारद्वारा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता
काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आइतबार दिउँसो संसद्मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद् मिन विश्वकर्मा प्रस्तावक रहेका छन् । महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी....
संविधान संशोधनप्रति राप्रपा सांसद् असन्तुष्ट !
काठमाडौं । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल र मतदान गर्ने भनिएको संसद्को महत्वपूर्ण बैठकमा सत्तारुढ घटक राप्रपाका सांसदहरु नै अनुपस्थित भएका छन् । राप्रपाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप नै जारी गर्दा समेत १० जना सांसद अनुपस्थित भएका हुन् । संसद् बैठकमा नआएका....